सबै पक्ष मिलेर कर र महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सबै पक्ष मिलेर कर र महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं
सबै पक्ष मिलेर कर र महंगी नियन्त्रण गर्न सक्छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता September 16, 2018	0 213 Views
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता
ने पाली कांग्रे सले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहे को छ । यो भन्दाअघि पटक–पटक सरकारको ने तृत्व सम्हाले को कांग्रे स प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । उसले सरकारको बिरो ध गर्दै सडक र सदन दुबै मा चर्काे आवाज उठायो  । अहिले आन्दो लन मत्थर जस्तै बने को छ । ने कपाको ने तृत्वमा रहे को दुई तिहाईको सरकार जनतास“ग जो डिएका धे रै विषयहरुमा सरकार भएको अनुभूति दिन सक्ने क्षमता भए पनि सरकारले जनतासग प्रत्यक्ष जो डिएका विषयहरुमा ध्यान दिन नसके को ने पाली कांग्रे सका युवा ने ता यो गेन्द्र चौ धरीले बताउनुभएको छ । सरकारको काम कारवाही, प्रतिपक्षको भूमिकाको विषयमा युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले कांग्रे सका युवा ने ता योगेन्द्र चौ धरीसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
नेपाली कांग्रे स सरकार बिरुद्धमा सडकमै उत्रियो  । सडकमै उत्रनुपर्ने त्यस्तो के ग¥यो सरकारले ?
सरकारविरुद्ध आन्दो लन भन्दा पनि सरकारलाई सचे त गराएको हो  । सरकार स् वे च्छाचारी तरीकाले अगाडि बढ्नुभएन । सरकार संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मे वार पक्ष हो  । त्यसै ले सरकारले संविधानभित्रै रहे र आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । जनतालाई दिने से वा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सरकार संविधानभन्दा बाहिर रहे र के ही आफ्ना गतिविधिहरु बढाई राख्दा हामी स् वाभाविकरुपमा प्रतिपक्ष हुनुको नाताले सरकारलाई सचे त गराएको हो  ।
संविधान सरकारमा बस् ने हरुले नमान्ने हो भने संविधान जनताले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसै ले हामीले भन्यांै संविधानमा स् पष्टरुपमा व्यवस्था छ, संसदको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको महिला र पुरुष हुनुपर्ने छ भन्ने स् पष्ट उल्ले ख गरे को व्यवस् था हुदाहुदै पनि सरकारले सबै तहको सभामुख र उपसभामुखमा एउटै राजनीतिक दलको सांसदहरु हुनुहुन्छ । त्यसै ले यो चाहि“ संविधानभन्दा बाहिर भयो  । यसले राम्रो सन्दे श दिदै न । त्यो भएको हुनाले यो संविधानको बर्खिलापमा भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्छ सरकारका पक्षधरहरुलाई हाम्रो पहिलो सन्दे श थियो  । त्यसै गरी सबै यो गदान पुगे को न्याय परिषदको सिफारिस, जहा न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस् था छ, उहा“ले आफ्नै अध्यक्षतामा सिफारिस गरे को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नहुने परिस् िथति जसरी सिर्जना भयो यो पनि न्यायालयमाथिको हस् तक्षे प भयो  । त्यसै ले जब न्याय मर्छ त्यहा“ विद्रो ह हुन्छ । न्यायमाथिको हस् तक्षे प र न्यायालय माथिको हस् तक्षे प सह्य हुन सक्दै न । त्यसै ले यी गतिविधिले के पुष्टि गर्छ भने सरकार संविधान बाहिर गएको छ । त्यसै ले हामीले भन्यौ ं– सरकार संविधानभित्रै रहे र आफ्ना गतिविधि, आफ्ना क्रियाकलाप र निर्णयहरु गर्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई सचे त गराएका हौ ं । यसै गरी सरकार के हो भने विगतका सरकारले गरे को हरे क निर्णयहरुको निरन्तरता हो  । तर, सरकारले के ग¥यो भने विगतको सरकारले गरे का धे रै राजनीतिक निर्णयहरुलाई उल्ट्याउने प्रयास ग¥यो  । यो पनि एउटा हस् तक्षे पकारी भूमिका भयो  । यसले एउटा सरकारले गरे का निर्णय फे रि अर्काे सरकार आउ“दा त्यसलाई नमान्ने हो भने यो गलत परम्परा बस् न जान्छ र फे रि राजनीतिक दलहरुको बीचमा द्वन्द्व बढ््ने सम्भावना रहन्छ । जुन कुरा हामीले उठाइरहे का थियौ ं सडकबाट यसलाई पनि न्यायालयले पनि यो गलत हो , यो सरकार सच्चिनुपर्छ भने र जति राजनीतिक नियुक्तिहरु भएका थिए ।
तिनलाई फे रि पुनस् र्थापित गरे को इतिहास हामीले भर्खरै न्यायालयले गरे को निर्णयबाट दे ख्न सक्छौ ं । त्यसै ले सरकार गएकै हो त्यो बाटो मा । तर, सरकार सच्चिएर जानुपर्छ । सकारात्मक कुरामा प्रतिपक्ष र सरकारपक्ष सहमति खो जे र अघि बढ्ने परिस् िथति हामीसामु छ ।
यहाहरुको आन्दो लन बीचमा उठ्यो अहिले आन्दो लन बसे को छ । अहिले सरकारका गतिविधिहरु सही छन् ?
सरकारले जुन उट्पट्याङ तरिकाले जे –जे निर्णयहरु गरे को थियो  । त्यो भन्दा के ही तुलनात्मक रुपमा सहमतिको बाटो मा जान खो ज्यो कि भन्ने हाम्रो निस् कर्ष पक्कै पनि हो  । यो बीचमा त्यस्ता किसिमका संविधान, ऐ न, नियम मिचे र गरे का निर्णयहरु तुलनात्मकरुपमा जुनरुपमा अघि बढे को थियो , त्यो भन्दा के ही कमी आएको निश्चितरुपमा हो  ।
स्थानीय सरकारको कामलाई यहा“ले कसरी हे र्नुहुन्छ ?
यो हाम्रो निम्ति नया“ प्रयो ग हो  । त्यसै ले कतिपय साथीहरु, जनप्रतिनिधिहरुले नबुझे र पनि यो निर्णय गरे का हुन सक्छन् । तर, हरे क कुराहरु कर उठाउ“दा, ट्याक्स लगाउ“दा कानून बनाएर लगाउनु पर्ने संवै धानिक व्यवस् था हो  । तर यहा“ आफ्नै तरीकाले मे रो गाउ“पालिकाभित्र या नगरपालिकाभित्र यसरी लगाऔ ं भने र ऐ न, नियम, कानून नबनाइकन कर लगाएको हुनाले यो विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको निश्चितरुपमा हो  । तर पनि यो प्रयासलाई हामीले नया“ प्रयो ग भएको हुनाले टो टल ने गे टिभ रुपमा लिनु त ह“ुदै न । तथापि जनताबाट अहिले बिरो धहरु आइराखे का छन्, बिरो धका स् वरहरु सुनिन थाले का छन् । जनताले के अपे क्षा गरे का थिए भने दुई तिहाइको सरकार ने पालमा अहिले सम्म हामीले दे खे का थिएनौ ं । हामीले धे रै आरो प लगायौ ं । राजनीतिक अस् िथरताको कारणले ने पालमा विकास भएन कि । जनताले दुःख पाए कि । महंगी अनियन्त्रितरुपमा भयो कि भन्ने आरो प लगाइरहे को बे लामा दुई तिहाइ भएको सरकार, त्यसमा पनि तीन तहको सरकार बने को बे लामा हामी सिंहदरबारलाई जनताको आ“गनसम्म पु¥याउनुपर्छ, त्यो पनि भन्यौ ं । तर, यसको ठीकबिपरीत अहिले जनता यति धे रै करको मारमा परे यसले यो व्यवस् थानै खराब हो कि भन्ने धारणातर्फ जनताको बहस र छलफल अगाडि बढे को हामी पाउ“छौ ं । म व्यक्तिगतरुपमा नितान्त दुःखी छु कि यो व्यवस् थाप्रति नै जनताले प्रश्न उठाउने हुन् कि ? यो व्यवस् था नै ठीक हो इन कि भन्ने जनताको धारणा बन्ने हो कि भन्ने पो यहा“ चिन्ता बढे र आएको छ ।
त्यसै ले हामी वषौर् ंसम्म ने पाली जनताले संघर्ष गरे को बलिदानबाट प्राप्त गरे को यो व्यवस् थालाई हामीले कसरी टिकाउन सक्छौ ं भन्ने तर्फ सबै सचे त हुन जरुरी छ । त्यसै ले गर्दा यसतर्फ वित्तीय आयो ग बनाएर वित्तीय व्यवस् थापन गर्ने हो  । अनियन्त्रितरुपमा जसरी वित्तीय कार्यहरु भरहे का छन् यसलाई व्यवस् थापन गर्नका निम्ति वित्तीय आयो ग बनाएर यसलाई व्यवस् थापन गर्न जरुरी छ । अन्यथा सरकार यसप्रति समयमा सचे त भएन भने निश्चितरुपमा जनता यो व्यवस् थाप्रति प्रश्न उठाउने दिन आउनसक्छ । त्यसै ले हामी सबै यसप्रति सचे त हुन जरुरी छ । कांग्रे सले जहा“–जहा“ जितको छ । हामीले अब ट्याक्स नलिने निर्णय गरिसके का छौ ं । तथापि कांग्रे सले गर्ने निर्णय मात्रै हो इन मुख्य जिम्मे वार पक्ष सरकार भएकाले नियमन गर्नका निम्ति सबै पक्ष मिले र एउटा सहमतिमा गएर अनियन्त्रित रुपमा कर उठाउने कुराहरु, महंगीका कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ ं । सुनिरहे का छौ ं, चुनाव हुने बित्तिकै तीन सय रुपै या“ भन्दा बढी सिमे न्टको मूल्य बढे को छ । पे ट्रो लको मूूल्य आकाशिएको छ । यसले गरिवको घरको चुल्हो नबल्ने स् िथति छ । त्यसै ले यतातर्फ हामीले जनतालाई मार दिनु भन्दा पनि जनतालाई यो सरकार यो व्यवस् था जनताको पक्षमा हो भन्ने कुरा अनुभूत गराउनका निम्ति हामीले सबै कुरामा सचे त हुनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?
हाम्रो अनुभव के हो भने सधै के न्द्र सरकारलाई आरो प लगायौ ं । के न्द्रका ने ताहरुलाई आरो प लगायौ ं कि हाम्रो आर्थिक स् िथति बढाउने कार्यक्रम के न्द्र सरकारले ल्याउ“दै न । अहिले हामी त्यो सरकारको अभ्यास स् थानीय तहसम्म गर्दै छौ ं । स् थानीय तहको क्षे त्रफल पनि यति ठूलो भएको छ । त्यसै ले हामी आफ्ना युवाहरुलाई रो जगारी सिर्जना गर्ने ठाउ“हरु कहा“–कहा“ छन् । हामी उद्यो गहरुलाई आह्वान गरौ ं । को ही उद्यो गीहरुले यतिसम्म मान्छे लाई रो जगारी दिने उद्यो ग खो ल्यो भने हामी आफै निःशुल्क रुपमा जमिन उपलब्ध गराउ“छौ ं । हामी ट्याक्स कम गछौर् ं । हामी ट्याक्स लिदै नौ ं यति वर्षसम्म, फ्रि गर्छाै ं यति वर्षसम्म भन्ने स् कीमहरु बाहिर ल्याउन सक्छन् । यहा“ त उल्टो के छ आफ्नो भित्र रहे का उद्यो गहरुलाई कसरी भगाउने , कसरी अधिकतमरुपमा ट्याक्स लिने तर्फ पो काम भइरहे को दे खिन्छ । त्यसै ले पहिलो शर्त ने पालमा रहे का युवाहरुलाई रो जगारी दिने हो  । युवाहरुलाई रो जगारी दिन उद्यो ग नआइकन हामीले रो जगारी सिर्जना गर्न सक्दै नौ ं । यसका निमित्त उद्यो गहरुलाई अधिकतमरुपमा आफ्नो गाउ“पालिका नगरपालिकामा भिœयाउनको निम्ति के –के गर्न सकिन्छ ? उनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? घरमा गएर उद्यो गको लाइसे न्स दिने हो कि ? या उसको लाइसे न्सको निम्ति के –के पहल गरिदिने हो  । आफै पनि त्यसमा पहलकदमी लिएर उद्यो ग ल्याउनको लागि पहल गरे र रो जगारी सिर्जना गर्ने अवसर हामीले दे खिरहे का छौ ं ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय अहिले विवादित बनिरहे को छ । अहिले दे खिएको समस्याप्रति के छ धारणा ?
मलाई दुःख लाग्छ । त्यतिबे ला हाम्रै पार्टीका रामजनम चौ धरी स् वास् थ्यमन्त्री हु“दा स् वास् थ्य मन्त्रालयमा जा“दा साथीहरुले सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुको एउटा राजनीतिक सहमति दिनुहो स्, हामी राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यही बे लामा बनाउनुपर्छ है भने र महे न्द्र श्रे ष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहा“ सिसहनियामा बसे र जानु भएको रहे छ । उहा“ले बडो राम्रो सुझाव दिनुभयो र म आफ्नै हातले संसदभित्रै ले खे र सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुस“ग १३ जनाको हस् ताक्षर गराएर हामी स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन चाहन्छौ ं, घो राहीको उपक्षे त्रिय अस् पताललाई ।
त्यसरी निर्णय गराएर मन्त्रालयमा दिएर टिप्पणी उठे र त्यसरी प्रक्रियागत रुपमा अघि बढे र स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा त्यो रुपान्तरण भयो  । यत्रो हुदाहुदै मै ले मे हनत गर्दागर्दै पनि साथीहरुले जब यी सबै प्रक्रिया पूरा भए तर मलाई कसै ले सम्झे नन् । तर, जे भए नि व्यक्तिगत मे रो एउटा थो रै भए पनि गुनासो छ । तर, मलाई थाहा छै न यो राम्रो हो कि हो इन । मे रो गुनासो त्यहानिर रह्यो  । म व्यक्तिगतरुपमा यति खुशी थिए“ कि दाङमा पनि एउटा स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयो  । अब सिनियर डाक्टरहरु, प्रो फे सरहरु यहा आउनेछन् । दङाली जनताले मात्रै हो इन, यसको वरिपरि रहने जनताले राम्रो स् वास् थ्य उपचार पाउने छन् भन्ने मे रो अपे क्षा थियो  । तर भर्खरै उपकुलपति तो किसके को विषयलाई विवादित बनाउने प्रयास गरियो  । यो संकीर्णताले हामीले स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन सक्दै नौ ं । यसका निम्ति फे रि पनि भन्छु हामी राजनीतिक चिन्तनभन्दा बाहिर रहे का विषयमा कम्तिमा पनि साझा धारणा बनाऔ ं । यसका निम्ति कुनै दल विशे षको या सत्तापक्षको मात्रै हो इन्, प्रतिपक्षको पनि जिम्मे वारी हो  ।
दे उखुरीलाई कस्तो बनाउने तपाइको परिकल्पना के छ ?
दे उखुरीलाई एउटा सुन्दर ठाउ“ बनाउन सकिन्छ, मै ले एउटा झलझल्ती चित्र दे खे को छु । त्यहासम्म पुग्नको निम्ति मै ले जति म त्यतिबे ला हु“दाखे रि पहल गरें  । अन्य माननीयहरुको पनि पहल थियो हो ला । त्यलाई म छ“दै छै न भने र जाने स् िथति रहदै न । तर, मे रो पहलप्रति म व्यक्तिगतरुपमा सन्तुष्ट छु । हस् नापुरदे खि नाकासम्म बाटो बने को छ । मे रो व्यक्तिगत पहलमा, म दावाका साथ भन्न सक्छु । त्यो मे रो पहलमा ल्याएको यो जना मो टामो टी सम्पन्न हुने अवस् थामा पुगे को छ । पुल मात्रै बन्न बँकी छ त्यहा । साथै पश्चिमतर्फ भौ वा नाकामा साढे नौ करो ड रुपै याको यो जना थियो  । त्यसै गरी राप्ती पुलहरुमा मे रो विशे ष पहल कदमी थियो  । यो पहलस“गै मै ले दे खे को के हो भने राप्ती नदीलाई मुख्यरुपमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । राप्ती नदी अनियन्त्रित रहुञ्जे लसम्म दे उखुरीलाई हामी सुन्दर बनाउन सक्दै नौ ं । मे रो आफ्नो परिकल्पना के हो भने दे उखुरी क्षे त्रको राप्ती नदीलाई दुबै तिरबाट व्यवस् िथत गरे र दुवै तर्फबाट बाटो निकाले र गाडी चल्ने बाटो बनाएर दुबै को छे उमा शहर बसाल्ने  । मानव वस् ती बसाले र एउटा सुन्दर ठाउ“ बनाउन सकिन्छ भन्ने मे रो बा“चुञ्जे लसम्म प्रयत्न रहन्छ ।
Previous: कुछपिटपछि शिक्षक बेपत्ता
Next: औषधि उपचारमा समस्या